musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Isu vanhu tinopemberera Chikunguru 4, 2021
wedzero • Hurumende Nhau • nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Isu vanhu tese takasikwa takaenzana. Iyi ndiyo Kurota kweAmerica. Dambudziko rekutanga rakatarisana neUS yaive Mutero pasina anomiririra.
“Mutero usingamiriri!” kwaive kuchema kwehondo mumaAmerican 13 Colonies, ayo akamanikidzwa kubhadhara mutero kuna King George III weEngland kunyangwe aive asina mumiriri muBritish Paramende. Sezvo kusagutsikana kwakakura, mauto eBritish akatumirwa mukati kuti vadzimise kufamba kwekutanga kumukira. Kudzokorora kwakadzokororwa nevaColonist kugadzirisa dambudziko pasina kukakavara kwemauto kwakaratidza kuti hakuna zvibereko.
Musi waJune 11, 1776, maColoni 'Second Continental Congress vakasangana muPhiladelphia uye vakaumba komiti yaive nechinangwa chekunyora gwaro raizobvisa hukama hwavo neGreat Britain.
Dare iri raisanganisira Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams, Roger Sherman, naRobert R. Livingston. Jefferson, uyo aionekwa semunyori akasimba uye anonyatso kutaura, akagadzira gwaro rekutanga (sekuonekwa pamusoro). Shanduro makumi masere nesere dzakaitwa mukunyora kwake uye Continental Congress yakatora zviri pamutemo vhezheni yekupedzisira muna Chikunguru 86, 4.
Zuva rakatevera, makopi eDeclaration of Independence akagoverwa, uye musi waChikunguru 6, Pennsylvania Manheru Post rakava bepanhau rekutanga kupurinda gwaro rinoshamisa. Chirevo cheRusununguko kubva ipapo chave chiratidzo chenyika yedu chakanyanya kusununguka cherusununguko.
Musi waChikunguru 8, 1776, kuverenga kwekutanga kwevanhu kweChiziviso kwakaitirwa muPhiladelphia Independence Square kurira kwemabhero nemumhanzi webhendi. Gore rimwe chete gare gare, musi waChikunguru 4, 1777, Philadelphia yakaratidza Zuva reRusununguko nekumisikidza Kongiresi nekupemberera nemoto, mabhero, uye mafayawekisi.